Madaxweynaha dalka Mareykanka Barak Obama oo sheegay in xiligan aanu diyaar u aheyn in Ciidamo American ah uu u soo diro dalka Soomaaliya. - khaliilberberawi's blog
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barak Obama oo sheegay in xiligan aanu diyaar u aheyn in Ciidamo American ah uu u soo diro dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Mareekanka Barak Obaama ayaa ku sheegey wareysi uu la yeeshey wargeysga lagu magacaabo Beople in maamulkiisu si kastaba ku tala jirin in ciidamo uu u diro Wadamada Soomaaliya iyo Yemen.
Madaxweynaha Mareykanka Baraak Obaama ayaa sidoo kale sheegay in taasi badelkeeda maamulkiisa wadamada ay Mareykanka saaxiibada yihiin kula shaqeynayo oo iskaashi kala sameynayo wax ka waqabasha amaanka gobolada foodado ay ka taagantahay ee caalamka isagoo meesha ka saarey in Mareykanku ay kaligood ciidamo u dirayaan wadamada Soomaaliya iyo Yemen oo uu sheegay in uu ku xoogeystay Ururka Al-qaaida.
Waxaa uu shegay Mar uu ka hadlayay arinta dalka Soomaaliya in ay jiraan qeybo balaaran oo ay gacanta ku heyn Xukuumada KMG Soomaaliya isagoo tilmaamey in sababtasi awgeed dowlada Mareykanka in muda ah isha ku heysay xalada dalka Soomaaliya.
Barak Obaama ayaa ku nuux nuuxsadey in Mareykanku ay ka shaqeynayaan sidii xal wax ku ool ah loogu heli lahaa Wadamada amni darida ay ka jirto ee Dunida ee Caalamka.
Hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa imaanaya xili dhawaan taliyaha ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq Janaraal Deyfid Badriyas uu sheegay in dowlada Yemen ay diidey in ciidamada Mareykan ah dalkeeda la geeyo.
# Posted on Tuesday, 12 January 2010 at 7:03 AM